Makore makumi matatu nemana asina Cortázar: Zvinyorwa zvake zvakanakisa | Zvazvino Zvinyorwa
Julio Cortazar akafira mukati 1984, kunyanya musi waFebruary 12, nekuda kwezvaakaita nezuro Makore makumi matatu nemana mushure mekufa kwake. Ivo vanoti geniuses haife, uye ichokwadi, mabasa avo anogara achitsungirira, saka nhasi tanga tichida kuongorora zvimwe zvezvinyorwa zvavo zvakanaka newe. Hongu, kune akawanda, asi tine kanguva kadiki katinogona kuzvipira kune mumwe wevanyori vakanakisa veArgentina vatati tambova navo. Kunyangwe sezvaungave uchitoziva, nyika yake yekuzvarwa yaive Belgium.
1 Julio Cortázar, mudzidzisi weArgentina
1.2 "Nhau dzechronopios uye famas" (1962)
1.4 "Sevha kwayedza" (1984)
Julio Cortázar, mudzidzisi weArgentina
Cortázar akanyora nyayaakanyora prose, zvanga zviri mushanduri, Yakagadzirwa kudzidzira, akapawo iyo nhetembo uyezve, pa kudzokorora… Wakarasikirwa nechimwe chinhu chekunyora here? Isu hatifunge!
Rimwe nerimwe remabasa ake akazara rinogona kuwanikwa rakapepetwa ne Gutenberg Galaxy; zvisinei, nhasi mu Zvazvino Zvinyorwa, taida kuongorora zvimwe zvezvinyorwa zvake zvakanakisa ... Kunyange hazvo zvinyorwa, senge chero hunyanzvi, zvine hunhu hwega, tinogona kuva nechokwadi chekuti pakati pezvinyorwa zvakasarudzwa, muchawana zvimwe zvamunofarira. Tinovimba unofara nazvo!
Izvi counter novel yakakurumbira tinokwanisa kusarudza akawanda akanaka magwaro, zvisinei isu takasara neiyi, inoita kunge isu tiri a wakanaka kwazvo (ndezve chitsauko 7 chebasa):
«Ini ndinobata muromo wako, nemunwe ndinobata kumucheto kwemuromo wako, ndinoidhonza sekunge ichibuda kubva muruoko rwangu, sekunge kekutanga muromo wako uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga maziso ekugadzirisa zvese uye kutanga futi, ndinozviita kuti zviberekwe nguva dzese Muromo wandinoda, muromo unosarudzwa neruoko rwangu uye unokwevera kumeso kwako, muromo wakasarudzwa pakati pevose, nerusununguko rwechangamire rwakasarudzwa neni kuti urukweve neangu ruoko kumeso kwako, uye kuti nemukana wekuti ini handitsvage kunzwisisa zvinowirirana chaizvo nemuromo wako uyo unonyemwerera pazasi peuyo unodhonzwa neruoko rwangu.
Unonditarisa, padhuze unonditarisa, nekuwedzera zvakanyanya uyezve tobva tatamba macircops, tinotarisa zvakanyanya uye zvakanyanya uye maziso edu anova makuru, vanoswedera padhuze nepadhuze, vanowirirana uye iwo macircops anotarisana , vachifema vakavhiringidzika, miromo yavo vanosangana uye vanorwa zvinodziya, vachirumwa nemiromo, vasingazorore rurimi rwavo pameno avo, vachitamba mumakomba avo umo mhepo inorema inouya ichienda nepefiyumu yekare uye nekunyarara. Ipapo maoko angu anotsvaga kunyura mukati mevhudzi rako, zvishoma nezvishoma uchipuruzira kudzika kwebvudzi rako apo isu tichitsvoda sekunge tine miromo yedu izere nemaruva kana hove, nemafambiro ane hupenyu, nekunhuhwirira kwakasviba. Uye kana tikazviruma isu marwadzo anotapira, uye kana tikanyura mune pfupi uye inotyisa kuyamwa panguva imwe chete yekufema, iko kufa kwekufa kwakanaka. Uye pane chete mate uye kuravira kumwe chete kwemichero yakaibva, uye ndinonzwa uchidedera kuzondirwisa semwedzi uri mumvura.
"Nhau dzechronopios uye famas" (1962)
Basa renhau pfupi rinomutsa pfungwa dzinofungidzira uye surreal yemuverengi. Chinyorwa chinotevera chinogamuchira zita rekuti 'Ita seuri kumba':
«Tariro yakagadzira imba ndokuisa tile pairi iyo yakati: Tigashire kune vanouya pamba apa.
Mukurumbira wakagadzira imba uye hauna kunyanya kuiisa.
Cronopio akazviitira imba uye, achitevedzera tsika, akaisa pavheranda matiles akasiyana siyana aakatenga kana kuti aakagadzira. Matiles acho akarongedzwa kuitira kuti zviverengeke zvakateedzana. Wokutanga akati: Gamuchirai vanouya pamba pano. Wechipiri akati: Imba idiki, asi moyo muhombe. Wechitatu akati: Kuvapo kwemushandi kwakatsetseka souswa. Wechina akati: Isu tiri varombo chaizvo, asi kwete zvekuda. Wechishanu akati: Iyi poster inobvisa zvese zvakapfuura. Rajah, imbwa ».
Kwakave kutanga kweiye "munyori wenyaya" Cortázar. Mubasa iri tinogona kuwana nyaya, kunyanya zvisere, mune zviitiko zvezuva nezuva zvinoshanduka kuita hope dzinotyisa. Chidimbu chinotevera chatinoongorora chinobva munyaya yake yakanzi "Tsamba kumusikana muParis".
“Pandinonzwa sekunge ndicharutsa tsuro, ndinoisa zvigunwe zviviri mukanwa mangu sechiramba chakavhurika, uye ndinomirira kuti ndinzwe kudziya kuri kukwira pahuro pangu kunge chibereko chemunyu wemichero. Zvese zvinokurumidza uye zvinehutsanana, zvinoitika mune pfupi pfupi nguva. Ini ndinobvisa minwe yangu mumuromo mangu, uye mairi ndinobata chena bunny nenzeve. Iyo bunny inoita kunge inofara, ndeye yakasarudzika uye yakakwana bunny, chete diki kwazvo, diki senge chokoreti bunny asi chena uye izere bunny. Ini ndakariisa muchanza cheruoko rwangu, ini ndinosimudza fluff necress yeminwe yangu, iyo bunny inoita kunge inogutsikana kuti yakazvarwa uye inovira uye inonamira mhino yayo paganda rangu, ichiifambisa neicho chinyararire uye chine mutsindo kupwanya kwe tsuro yemhino yakanangana neganda reruoko. Anotsvaga chekudya uyezve ini (ndiri kutaura nezvazvo pakaitika izvi mumba mangu kumucheto) ndinoitora ndokuenda neni kubharanda ndokuiisa muhari hombe panochekerera clover yandakarima nemaune . Iyo bunny inosimudza nzeve dzayo zvizere, inoputira kavhavha yakapfava neinokurumidza muzizi pinwheel, uye ndinoziva kuti ndinogona kuisiya ndoenda, kuenderera kwenguva kwenguva hupenyu husina kusiyana neiyo yevakawanda vanotenga tsuro dzavo mumapurazi ».
"Sevha kwayedza" (1984)
Waive bhuku rekupedzisira yakanyorwa naCortázar, uye yakanyorwa kubva mugore rimwe chete rekufa kwake, 1984. Pakati pevakasarudzwa, iri bhuku rekupedzisira renhetembo raisagona kushayikwa, maakabata nanyanduri, rudo, Paris newaanoda Buenos Aires, pakati pezvimwe zvidzidzo. .
«Kana ndichifanira kurarama ndisina iwe, ngazvive zvakaoma uye zvine ropa,
muto unotonhora, shangu dzakatyoka,
Kana kuti iyo pakati pehuzhinji iro rakawoma bazi re
kuhukura kwandiri zita rako rakaremara, mavhawoni efuro,
uye machira anonamira kuminwe yangu, uye hapana chinondipa
Ini handizodzidza nekuda kweizvozvo kukuda zvirinani,
asi akabviswa pamufaro
Ndichazoziva kuti wakandipa marii
ingori dzimwe nguva kuve padyo.
Ini ndinofunga ndinonzwisisa izvi, asi ndiri kunyengera:
inotora chando chepamusoro
saka kuti yakachengetedzwa pasuo
nzwisisa iyo yekudyira mwenje,
machira etafura emukaka,
iyo inopfuudza ruoko rwake rwerima kuburikidza nepakati.
Sezvo kure newe seziso rimwe kubva kune rimwe,
kubva pane iyi inofungidzirwa nhamo iyo tarisiro ichave ichazvarwa
izvo pakupedzisira zvinokodzera iwe ».
Wakaverenga mabhuku mangani naJulio Cortázar? Uyu munyori, akazvipira kuzvinyorwa zvemhando zhinji, ndeupi waunofunga kuti akaita zvakanakisa? Vanoti akakunda kupfuura vese semutauri wenyaya, ... Uye zvinogona kunge zviri zvechokwadi. Asi, iyi nhetembo yekupedzisira inoita senge yakanakisa kwauri?
Ini ndazvitaura zvisati zvaitika: Mabhuku, senge chero humwe hunyanzvi, hwakavakirwa pamaonero ekuzviisa pasi ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Makore 34 Pasina Cortázar: Zvinyorwa Zvake Zvakanakisa